Supercell na-arụ ọrụ na asọmpi maka Clash Royale | Gam akporosis
Izu a abụwo ihe na-atọ ụtọ maka Supercell, ụlọ egwuregwu vidio na-elekọta Clash Royale, Nsogbu nke Clans, Hay Day na Boom Beach. Nke mbụ, site na ozi nke nnweta ya nke Tecent, na nke abụọ, site na nweta Hay Day ihe na-akpali mmelite cna isiokwu nke udu mmiri na gini ga abụ ahia maka agbata obi. A Supercell anyị na-eji ka ya ụzọ mmelite na-enyekwu ọdịnaya mbụ maka nde ndị egwuregwu ya na-egwu egwuregwu vidio ha kwa ụbọchị.
Site na akaụntụ Twitter ya, Supercell kesara foto na okwu ole na ole nke ahụ na-egosi ihe ha na-arụ ọrụ ugbu a. Na onyonyo ahụ enyere, enwere taabụ ọzọ na-esote mkparịta ụka ezinụlọ nwere aha "Asọmpi" ma ọ bụ asọmpi. Ọnọdụ egwuregwu ọhụrụ nke na-eso asọmpi ndị ahụ niile a na-ahazi na Supercell chọrọ isonye na taabụ pụrụ iche nke na-enye ọtụtụ nde ndị egwuregwu ihe egwuregwu vidio a.
Anyị enweghị ozi ọzọ karịa na onyogho a na - akọrọ "asọmpi" na okwu Supercell na - ekwu na ha bụ na-arụ ọrụ a mma n'oge ndị a. A ụzọ bulie hype ma ọ bụ atụmanya maka ọzọ isi update nke egwuregwu na nke ahụ bụ na par na ndị ọzọ nke ndị ọzọ nke ya na utu aha nke ọtụtụ ugboro ha na-eweta ihe ọdịnaya na dị iche iche na-arụzi ụgbọala ma ọ bụ gameplays.
Naanị ntakịrị ihe anyị na-arụ ọrụ… pic.twitter.com/FuJFiTpDud
- Nsogbu Royale (@ClashRoyale) June 23, 2016
Ya mere Supercell ga-eme atụmatụ ihe omume ga-eme n'ọdịnihu nke ha ga-eme uru ga-aba uru maka ndị egwuregwu niile. Naanị ihe anyị na-atụ anya bụ na ha ga-enwe ike ịmalite ọkwa dị iche iche ka ọ bụghị naanị ndị nwere ọkwa kachasị elu nwere ike irite uru na ha.
Ọzọkwa a mode ga-ekwe ka anyị na- bụrụ ndị nkiri ma si otú ahụ na-ele ndị kasị mma egwuregwu duel maka ndị ụgwọ ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Clash Royale na-arụ ọrụ na asọmpi maka mmelite ọzọ